‘म यस्तो गीत गाउँछु’ले दुई दिनमा कति कमायो त ?
Posted on July 17, 2017 by 99celebrity	‘म यस्तो गीत गाउँछु’ले दुई दिनमा कति कमायो त ?Rate this post गएको शुक्रवारबाट अल नेपाल प्रदर्शनमा आएको पल शाह र पूजा शर्मा अभिनित फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ले रिलिजको पहिलो दिनदेखि नै सुखद व्यापार गरिरहेको छ । शुक्रवारको तुलनामा शनिवार फिल्म हेर्ने दर्शकको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो भने आइतवार पनि दर्शकको भिड कम नभएको वितरकले बताएका छन् ।
काठमाडौं बाहिर फिल्म वितरणको जिम्मा लिएका मनोज राठीले फिल्मीखबर डटकमसँग कुराकानी गर्दै ‘म यस्तो गीत गाउँछु’को दुईदिने कलेक्शन ६० लाख ग्रस रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘शुक्रवारदेखि आइतवार दिउँसोसम्म मोफसलका प्रत्येक सिनेमा हलहरु हाउसफूल छन् । साधारणतया आइतवारबाट फिल्मको व्यापारमा गिरावट आउन थाल्छ तर ‘म यस्तो गीत गाउँछु’मा शुक्रवारभन्दा आइतवार झन दर्शकको चाप बढेको छ ।’ राठीका अनुसार, फिल्मलाई आइतवारबाट धेरै ठाउँमा हल पनि थपिएका छन् ।
यस्तै, ‘म यस्तो गीत गाउँछु’बाट फिल्म वितरणमा समेत हात हालेकी नायिका रेखा थापाले शुक्रवार र शनिवार गरि फिल्मले राजधानीबाट १ करोड २० लाख ग्रस कलेक्शन गरेको जानकारी दिइन् । रेखाले भनिन्, ‘शुक्रवार र शनिवार ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ राजधानीका मल्टिप्लेक्स र सिंगल हल सबैतिर हाउसफूल थिए । सयौं दर्शकहरु टिकट नपाएर फर्किए पनि । आइतवार पनि सबै हल हाउसफूल भएको जानकारी पाएको छु ।’ उनका अनुसार, आइतवार पनि गोपीकृष्णको ठूला ४ वटा हल हाउसफूल छन् । अष्टनारायण र गुणमा पनि दर्शकको चाप उतिक्कै रहेको रेखाले बताइन् ।
मोफसल र राजधानी गरि ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ले दुई दिनमा १ करोड ८० लाख ग्रस विजनेश गरेको फिल्म वितरकको व्यापारिक रिपोर्ट बताउँछ । हिजो शनिवार गोपिमा रहेका ७ पर्दाहरु मध्ये ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ ५ वटामा लागेको हो । बालाजुको अष्टनारायण हलमा भने फिल्मले रेकर्ड नै बनाएको छ । हिजो शनिवार अष्टनारायणको ३ बजेको शोमा हलमा भएका चारवटै पर्दाहरु हाउसफूल भएका थिए ।
फिल्म हेर्ने दर्शक मल्टिप्लेक्मा पनि उतिक्कै छन् । शुक्रवार र शनिवार क्यूएफएक्स अन्तर्गतका हलमा ५ शो पाएको ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ले सोमवारबाट १० शो पाउने भएको छ । स्रोत भन्छ, ‘हिजो शनिवार साँझ ६ बजेको शोमा क्यूएफएक्स सिभिल हलमा हलीउड फिल्म ‘स्पाइडर म्यान’को सट्टामा अत्याधिक डिमाण्ड भएपछि ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ देखाएका थियौं । क्यूएफएक्स अन्तर्गतका सबै हलमा प्रदर्शनको पहिलो दिन ८० प्रतिशत, दोस्रो दिन सय र तेस्रो दिन अर्थात आज आइतवार फिल्मको ६० प्रतिशत अकुपेन्सी छ ।’
फिल्मका मुख्य कलाकारहरु पल शाह, पूजा शर्मा, राजाराम पौडेल, निर्देशक एवं निर्माता सुदर्शन थापा लगायत शुक्रवारदेखि राजधानीका हल-हलमा गएर दर्शकको प्रतिक्रिया लिइरहेका छन् ।
नेपाली ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ले दुई दिनमा कति कमायो त ?	Post navigation
दीपिका दुब्लाएर झिरिप्प, फ्यानले मजाक उडाए	छविसँग यही वर्षको अन्तिममा बिहे गर्छुः शिल्पा पोखरेल Search 1000+ Celebrities	Popular Posts	Recent Posts	उषा अब निर्मात्री, बन्ने भयो ‘आउँदै जादै’